Reporter’s Account: Hledan Protest March 6, 2015
This entry was posted on March 7, 2015 at 3:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
March 7, 2015 at 3:19 am | Reply
Nay Myo Wai uploadedanew video.
March 7, 2015 at 3:21 am | Reply
Mg Lu Gri ပြောချင် သလိုပြော၊။ ကျောင်းသား သပိတ် နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန် မြို့တော်ခန်းမ မှာ စုဝေးတဲ့ပြည် သူတွေ ကို ဖြေ ရှင်းပုံ ဖြေရှင်း နည်း က လက် ရှိ အာ ဏာရ ကြံ့ ခိုင်ရေးပါတီ ရဲ့ ၂၀၁၅ ပါ လီမန် ရွေးကောက်ပွဲ မှာ အခြေအနေ ဆိုးတစ်ခု ကို ရောက်သွား စေ နိုင် တယ်၊ ဒေါင်းသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ ။ တကယ်လို့စစ် တပ် က အာဏာသိမ်း ရင်တောင် ခု လက် ရှိ ဦးသိန်းစိန် နဲ့ ၀န်ကြီးများ အဖွဲ့ ကိုယ့် အိမ်ကို ပြန် တော့။စစ်တပ်က လည်းပြန် လက်ခံတော့မှာ မဟုတ် ဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လည်း အချီ ကြီးရှုံးမယ်။ ဆုပ်လည်းစူး၊စားလည်းရူး အဆင့်ကိုရောက် နေပြီလို့ပဲ ဝေဖန်သုံးသပ် မိပါ တယ်။ မှတ်ချက် ။ ကျွန်တော်က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ကိုအား ပေးသူလည်း မဟုတ် ပါဘူး၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အား ပေးသူလည်း မဟုတ် ဘူး။ ပကတိ အခြေအနေကို ဝေဖန်ခြင်းသာဖြစ်ပါ တယ်။
အကြမ်းဖက်တာ မဟုတ်ကြောင်း ၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ပြောကြား LIES
March 7, 2015 at 5:29 am | Reply
March 7, 2015 at 6:20 am | Reply
March 7, 2015 at 6:37 am | Reply
Alibabatlb Ali ဆရာပြောတဲ့ ပန်းထိမ်ဆိုင်တွေ
March 7, 2015 at 6:47 am | Reply